<<first <prev (91)
The Theme Song(Jewel In The Palace)
Posted By - Ko Ko - June 2, 2006
နန်တွင်း ရတနာ ရဲ့ အဖွင့် သီချင်း
နန်တွင်း ရတနာ ဇါတ်လမ်း တွဲး အဖွင့် သီချင်း "Onara" ရဲ့ စာသား မှာ ခေတ် မကျ ရှေး မကျ တဲ့ ကိုရီးယာ စါသား ဖြစ် နေ လို့ကိုရီးယာ အချင်းချင်း မှာ ကို ဘဲ အမျိုးမျိုး အဓိပ္ပယ် ဖွင့် ခဲ့ ရကပါ တယ်။
နောက် တော့ စာရေး ဆရာ "Se-Hyeon Im" ကိုယ်တိုင် သူ့သီချင်း သူ ရှင်းပြ တော့ မှဘဲ အငြင်းအခုံ တွေ ရပ် သွား ပါ တော့ တယ်။
စါရေး ဆရာ ရဲ့ အာဘော် ကတော့ အောက် ပါ အ တိုင်း ဖြစ် ပါ တယ်။
ခေါ် ရင် သူ တကယ် လာ မှာ လာ ?
ခွဲ ကြစို့ဆို ရင် တကယ် ခွဲ ရက် သ လား ?
ရက် ပေါင်း များ စွာ စေါင့် သော် လည် ဆုံ ဆည် ရန် မလွယ် ပါ
မလွယ် -- မလွယ် -- တကယ် မ လွယ် ပါ
ငါ့ ဆီ မင်း မလာ နှိင် ရင်-- မင်ငါ့ ကို ခေါ် လှည့်ပါ
"Onara" Theme Song of "Jewel in the Palace"
Tags: korean drama | korean music
Summary - Description of themes song sung in Jewel in the Palace, written by Se-Hyeon Im, also translation in Myanmar
Article Link - http://video.phpmyanmar.com/video/article/63/the-theme-songjewel-in-the-palace
နန်းတွင်းရတနာ တကယ် ရှိ ခဲ့သလား?
အခုတလော မြ၀တီ ရုပ်သံ မှာ လူကြိုက် များ နေ တဲ့ မင်သမီး လေး "Lee Young-ae" ရဲ့ နန်းတွင်း ရတနာ ဇာတ် ကား ဟာ တကယ် ရှိ တဲ့ ရာဇ၀င် ပါ။
"Dae Jang Geun" လို့အမည် ရှိ တဲ့ နန်းတွင်း အမျိုးသမီး သမားတော် တဦး ဟာ ကိုးရီးယား ရာဇ၀င် မှတ်တမ်း တွေ မှာ တကယ် ရှိ ခဲ့ ပါ တယ်။ ဒီ အကြောင်း ကို Joseon မင်း ဆက် ရဲ့ မေါ် ကွန်း စါတမ်း မှာ မှတ်တမ်း တင် ထားတာ တွေ့ ရ ပါ တယ်။
နန်တွင်းရတနာ ဇာတ်လမ်း ကို ၁၅ ရာစု အကုန် ၁၆ ရာစု အစပိုင်း ကာလ တွင် အခြေခံပြီ ကိုးရီးယား နန်းတွင်း မှော်ကွန်း Annals of Jesoen Dyanasty တွင် ဖေါ်ပြ ထားသည့် အလွန် ထူးချွန် သော Dae Jung Geun (ချန်ဂင်) အမည် ရှိ အမျိုးသမီ နန်းတွင်း သမားတော် တဦး အကြောင်း ရိုက်ကူး ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ထိုခေတ် ကာလ မှာ ယောက်ျား များ ကြီး စိုးပြီး အမျိုးသမီး များ အနှိမ်ခံ နေရ သည့်ကာလ ဖြစ်ပါ သည်။
သူ၏ ထူးချွန်မှု ကြောင့် ချန်ဂင် သည် နန်တွင်း သမားတော်ချုပ် ဖြစ်လာ သည့်အပြင် ကိုရီယား ရာဇဝင် ၏ တဦး တည် သော အမျိုးသမီး ဘုရင့် ကိုယ်ရေ သမားတော် လည်း ဖြစ်ခဲ့ ပါသည်။ ယခု လက်ရှိ ကိုရီယား သမတကြီး ၏ ကိုယ်ေ၇း ဆရာဝန် သည် ပင်လျှင် အမျိုးသား ဆရာဝန် ဖြစ် ပါသည်။
Tags: korean actress | korean drama | korea
Article Link - http://video.phpmyanmar.com/video/article/61/jewel-in-the-palace
32592e7d90c2d3d9fec461716740a586 - January 23, 2018 - 4:59:12 pm